Carl Henry Global - Ịmepụta Ụlọ Akwụkwọ Ịntanetị na-agụ akwụkwọ maka Ị!
Ịchọrọ ịmepụta ego ego azụmahịa? Anyị nwere ike inyere gị aka na ụlọ ọrụ ọ bụla!
Business Business Online (ROB), weebụsaịtị eCommerce,
ntanetị n'ịntanetị, vidiyo, eserese, mbipụta 3D & mbipụta dijitalụ
Jikọọ anyị Akwụkwọ Akụkọ maka ndụmọdụ n'efu & mmelite
Ulo oru Ozo Maka Gi! Kedu ka m nwere ike isi malite ngwa ngwa n'ịntanetị?
Mee Onwe Gị
"Nye mmadụ ego ha ga-eri maka otu ụbọchị…,
kuziere mmadụ otu esi enweta ego na ha ga-eri nri maka ndụ! "
Nweta eBook a!
ị nwere ike bụrụ ONLINE! NSO
Nke a bụ ụkpụrụ nduzi nke kpaliri m iru Carl Henry Global, Achọrọ m inyere ndị mmadụ aka ibido n'ịntanetị n'ụzọ kachasị ọsọ ọsọ ma kwado ndị mmadụ n'ụzọ ha chọrọ.
Peoplefọdụ ndị chọrọ ka egosi ha; Ewu esi azụlite azụmahịa na ntanetị ma ha ga-anọ naanị ha (Gosi unu) ụfọdụ ndị chọrọ ntakịrị enyemaka ma anyị nọ ebe a iji mejupụta oghere ọ bụla.NA GỊ), n'ikpeazụ enwere ndị nwere ego itinye ego karịa ka ọ dị ugbu a, na nke a anyị nwere ike ịnagide ntọala ị na-eme n'ịntanetị gị (MAKA GỊ).
Nwere ike imuta ihe niile ịchọrọ iji ebook m dị n’elu - aga m ezitere gị ya n'efu ma ọ bụrụ na ị gwa m ebe m ga-eziga n'okpuru.
Anyị Na-akwanyere Nzuzo Gị - Anyị anaghị ere nkọwa ịkpọtụrụ gị
Ị nwere ike na Carl Henry Global eme-eme azụmahịa !!
Anyị nwere ike ịnye gị azụmahịa nke ị nwere ike ịmalite ịntanetị dị ka obere oge 10!
ihe niile ị ga - eme bụ ịmalite iziga ndị mmadụ na azụmahịa dị njikere. Ị ga-ahụ ụfọdụ nhọrọ n'okpuru.
Nke a bụ ihe atụ nke azụmahịa ịntanetị ị nwere ike ịmalite iji ozugbo, na iji software a bụ n'efu !! Pịa oyiyi iji mụtakwuo :-)
Wụpụta Ụlọ Ahịa nke Gị!
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara otu esi emepụta azụmahịa n'ịntanetị ọ bụla niche ma ọ bụ ọrụ gụrụ ONLINE! MGBE AHỤ - Ụkpụrụ (Ndị Òtù Na-adịghị Mkpa achọrọ)
Ị nwere ike ịgụ usoro ihe omume 9 n'ihe gbasara akwụkwọ a na ngalaba onye òtù anyị, bụrụ onye so na ya ugbu a! Ị ga-enwe ike ibudata na ebook zuru ezu.
Bụrụ Onye Na-enweghị Nzuzo Taa!
Ndị òtù anyị na-aghọwanye ndị bara uru n'ụbọchị ọ bụla, anyị na-agbakwụnye nza nke ozi pụrụ iche, ngwá ọrụ, ndụmọdụ na eBooks ...., na ọtụtụ ihe ndị ọzọ iji nyere gị aka ịmalite, na-agba ọsọ na ịmepụta azụmahịa n'ịntanetị!
Anyị na-enye gị ọzụzụ iji melite mmekọrịta anyị
Na ihe karịrị 40 afọ ahịa azụmahịa na karịa 20 afọ online anyị nwere ike ịfe ọtụtụ ozi ga-enyere gị ọsọ ọsọ gị ma zere imehie.
Anyị na-ebufe, weghachite ma na-enyere ndị mmadụ aka, Online & Offline. Ngwongwo anyị, Ọzụzụ & Ngwaahịa na-ekpuchi Ego, Ụlọ Ala, Intanet, Ụlọ Ọrụ & Ojiji. Anyị na-enye 3 Business Relationships; Gosi gị - Ozi; Gị - Nchịkọta; Maka Gị - Ọrụ zuru oke
Ọnwụnwa ụbọchị 30 efu - Sistemụ Azụmaahịa Email nke akpaaka
Ị nwere ike ịnweta ohere zuru ezu na arụmọrụ Free System Free Business Automation !!
Ndewo ebe ahụ!!!
Achọrọ m ịmepe gị ka ị rụọ ọrụ na Email Automation Email - ọ bụ ụzọ nke ịmepụta azụmahịa n'ịntanetị nke, ozugbo e guzobere, hapụ gị ohere ilekwasị anya n'ahịa na n'ọkwá - usoro a na-akpọ Get Response a na-akpọ "Autoresponder"
Pịa njikọ a iji gbalịa nweta GetResponse n'efu maka ụbọchị 30 !!
Anọ m na-agbalị nyocha ọ bụla ntinye ederede n'akwụkwọ ahụ iji nweta ndị na-edebanye aha na ndị ọzọ nwere ike ịzụ ahịa. Lelee Video >>>>
Mara ihe na-arụ ọrụ kachasị mma? Ọ na-enye ndị ọbịa ọtụtụ ụzọ okike iji banye maka ndepụta m. Ya mere, m na-enyocha nchịkọta ụdị ụdị dị na akaụntụ GetResponse email.
Ụdị Ụdị Dịgasị iche
Dịka ọmụmaatụ, na isiokwu m, enwere m ike ịmepụta akwụkwọ mpịakọta nke na - agbaso onye na - agụ ya ka ha na - agbada na ibe - nchetara enyi ịbanye maka mmelite. Ma ọ bụ tinye a ụdị nkwụsị na n'elu ihe nchọgharị onye na-agụ, n'ihi ya, ọ na-eche mgbe nile.
GetResponse na-agụnye ụzọ ndị dị mma iji jidere - ụdị ọkụ na ... nke ọma, ọ na-ama jijiji (dị nwayọọ) iji jide anya onye na-agụ ya. Enwere ihe wepụ ụdị mpụta ị nwere ike ịtọ ka ịpụta mgbe onye na-agụ ya na-ahapụ (iji belata bounces). Na ihe ụdị mmapụta oyiyi nke na-enye gị ohere igbakwunye foto ma ọ bụ oyiyi mara mma.
Otu n'ime atụmatụ m bụ inye onyinye ntinye aka ntinye aka ma ọ bụ "Nta na-eduzi". M na-eji ụdị mpempe akwụkwọ na-emepụta a Free eBook na-agbakwụnye ọhụrụ subscriber na m ahịa ndepụta, akpaaka-magically !!!
Gụkwuo: Ọnwụnwa ụbọchị 30 n'efu - Sistemụ Azụmaahịa Email nke akpaaka